Cetilistat (282526-98-1) Warshadaha alaabooyinka soosaaraha
CMOAPI waxay leedahay noocyo kala duwan oo ceyriin ah oo ah Cetilistat, waxayna leedahay wadarta nidaam maarayn tayo leh.Waxay sidoo kale gudbisay shahaadada GMP iyo DMF.
Cetilistat budo Macluumaadka Saldhiga
Muuqaal Powder Gray
Miisaanka kelli 316.31 g / mol
saxid kaydinta Heerkulka qolka
Waa maxay Cetilistat?
Cetilistat (CAS lambar.282526-98-1) sidoo kale loo yaqaan ATL-962, ATL 962 ama Citilistat waa dawo lagu tilmaamay daaweynta buurnida. Waxaa loo isticmaalaa kaloori yar, cunto dufan yar, iyo jimicsi habboon si looga caawiyo dhimista miisaanka.
Dawada ka hortagga cayilka ee cetilistat waxaa lagu iibiyaa magacyo kala duwan oo ay ka mid yihiin Cetislim, Kilfat, Oblean, iyo Checkwt.
Cetilistat waa benzoxazine, xannibaadaha lipase-ka caloosha oo ka shaqeeya kaas oo ugu horreyn ka shaqeeya isaga oo ka hortagaya dheef-shiidka iyo nuugista dufanka cuntada.
Sidee Cetilistat wuxuu daaweeyaa buurnaanta?
Cayilka xad dhaafka ahi waa mid ka mid ah dhibaatooyinka caafimaad ee bulshada maanta ugu badan. Waa cillad adag, dabadheeraad ah iyo sidoo kale cillad isku-dhafan oo isku-dhafan oo lagu garto isku-ururinta unugyada dufanka badan / adipose.
Cayilka xad dhaafka ah wuxuu la xiriiraa cuduro caafimaad sida nooca sonkorowga 2, dhiig-kar, hyperlipidemia, kolestarool badan, kansarrada qaarkood, iyo qaar ka mid ah cudurrada wadnaha iyo xididdada dhiigga sida istaroogga iyo wadno-xanuunka
Cayilka dalal badan ayaa gaadhay heerar faafa oo markaa waa walaac caafimaad oo adduunka ah.
Cilmi baaris ayaa muujisay in miisaanka joogtada ah ee 5 ilaa 10% miisaankaaga hore ee jirka uu si weyn u yareyn karo buurnida la xiriirta jirro-xumada.
Cetilistat waxaa loo tixgeliyaa inuu yahay wakiil ka hortagga cayilka. Wakiilada ladagaalanka buurnida badanaa waxay kordhiyaan kharashka tamarta sidaas awgeed miisaanka oo yaraada iyadoo loo marayo sharciyeynta neerfaha iyo dheef-shiid kiimikaadka.
Cetilistat waa calool-istaaga ganaca caloosha ee xannuun-joojiyaha oo ah wakiil wax ku ool ah oo ka hortagga buurnida ee daraasadaha aadanaha.
Cetilistat way shaqaysaa adoo xiraya dheef-shiidka iyo nuugista dufanka ku jira cuntada aad cunayso. Marka dufanka aan la dheefsan waxaa lagu soo saaraa saxarada inta lagu jiro caloosha. Waxay ku fulisaa tan iyada oo la xakameynayo lipase enzyme-ka mas'uulka ka ah jebinta triglycerides (dufanka / dufanka jirka) ee xiidmaha.
The saameynta cetilistat sidaa darteed waxaa lagu soo bandhigaa marinka caloosha iyo caloosha. Sidaa awgeed macnaheedu waa in cetilistat ay ka duwan tahay wakiilada kale ee buurnida ee saameeya maskaxdaada si loo yareeyo rabitaanka cuntada maxaa yeelay waxay ka shaqeysaa durugsan.
Marka dheefshiidka iyo nuugista dufanka cuntada la joojiyo, dufanka dufanka ayaa xaddidan sidaas darteed kharash yar oo tamar ah oo keena miisaanka oo yaraada.
In kastoo, Cetilistat ayaa kaa caawin doonta inaad miisaankaaga hoos u dhigto adiga ayay kugu habboon tahay inaad ilaaliso cunno nafaqo leh oo dufan yar oo ay weheliso jimicsi loogu talagalay maaraynta buurnida guuleysan.
Labadaba iyo liistada labaduba waa daawooyin dhakhtar qoro oo loo isticmaalo daaweynta buurnaanta. Waxay soo bandhigaan qaab ficil oo la mid ah kaas oo ay ku gaarayaan miisaan lumis.
Cetilistat iyo liistada ayaa ah ka hortagga ama yaraynaya dheef-shiidka iyo nuugista dufanka cuntada. Laybaarku waxay mas'uul ka yihiin burburka triglycerides ee mindhicirada. Dufanka aan isbeddelayn ayaa halkii ay ka soo bixi lahaayeen saxarada saxarada dadka ku jirta. Waxqabadkaani wuxuu hubiyaa in dufanka aysan ku dhex jirin jirka taasoo keeneysa miisaanka oo yaraada.
Miisaanka oo yaraada ayaa si weyn looga soo sheegay cetilistat iyo orlistat labadaba. Guusha cetilistat vs orlistat waxay kuxirantahay qaab nololeedkaaga maadaama ay kaaga baahan yihiin inaad ku ekaato cunno nafaqo leh oo kaloori-yar leh oo ay weheliso jimicsi joogto ah.
Cetilistat iyo sidoo kale orlistat waxay muujinayaan xakamaynta glycemic la xoojiyay sida lagu caddeeyay hoos u dhac weyn oo ku yimid hemoglobin plasma glycosylated. Waxay sidoo kale yareeyaan halista jirrooyinka la xiriira cayilka sida cudurrada wadnaha, dhiig karka, heerarka kalastaroolka oo sareeya, iyo nooca sonkorowga 2.
Saameynaha ugu caansan ee la xiriira cetilistat iyo orlistat waa saameynaha caloosha badanaa waxaa sababa dufanka aan isbeddelayn. Si kastaba ha noqotee, markaad isbarbardhigto cetilistat vs orlistat marka la eego dhibaatooyinka soo raaca, waxyeelo badan ayaa la xiriirta liiska ama liistada marka loo eego cetilistat. Intaas waxaa sii dheer, darnaanta saameyntu waxay si aad ah ugu muuqataa liistada marka loo eego cetilistat.
Marka la isbarbar dhigayo dulqaadka cetilistat vs orlistat, cetilistat waxaa lagu soo warramey in sifiican looga dulqaadan karo liiska.
Daraasad 12 toddobaad ah oo ku lug leh bukaanno cayilan oo qaba nooca sonkorowga 2 ayaa la sameeyay si loo qiimeeyo miisaanka oo yaraada, hoos u dhaca hemoglobin glycosylated, iyo u dulqaadashada cetilistat marka loo eego orlistat. Daaweynta waxaa lagu daray cunto dufan yar oo dhexdhexaad ah iyo sonkorow mellitus oo lagu maareeyay isticmaalka metformin.
Daraasadu waxay ogaatay in cetilistat iyo orlistat labaduba ay si weyn hoos u dhigeen miisaanka iyo sidoo kale hagaajinta xakamaynta glycemic. Daawooyinka sidoo kale waxay yareeyeen halista cudurada wadnaha iyo xididada iyagoo yareynaya wareega dhexda oo ah tilmaame cudurka wadnaha.
Daraasaddan, dhibaatooyinka soo raaca ee la arkay waxay ahaayeen saamaynta caloosha oo aad ugu badan tahay liiska, iyo sidoo kale darnaanta saameynta la xiriirta liistada ayaa lagu ogaadey inay ka sarreyso tan cetilistat. Kala duwanaanshaha saameynta cetilistat vs orlistat waxaa loo aaneyn karaa kala duwanaanshahooda dhisme iyo kiimiko.
Ka-noqoshada daraasadda waxay u sabab ahayd waxyeelo waxayna ka badnaayeen liistada marka loo eego cetilistat. Intaa waxaa sii dheer, 'cetilistat' ayaa looga dulqaatay liiska.
Yaa awooda isticmaal Cetilistat?
Waxaa laga yaabaa inaad tixgeliso qaadashada Cetilistat (282526-98-1) haddii aad u baahan tahay inaad miisaankaaga dhinto. Si kastaba ha noqotee, sida daroogo kasta oo kale, qaado taxaddarrada lagama maarmaanka ah inta aad qaadanaysid dawadan.
Cetilistat waxaa lagula talinayaa dadka qaba miisaanka cufnaanta jirka (BMI) oo ka sarreeya 27. Sidoo kale waxaa lagugula talinayaa inaad qaadato cetilistat haddii BMI-gaagu ka sareeyo 27 oo aad ka cabaneysid xaalado la xiriira buurnida sida sonkorowga iyo dhiig-karka. BMI waa tilmaame dufanka jirka oo lagu xisaabiyo iyadoo loo qaybinayo miisaankaaga kiilogaraam laba jibbaaran oo dherer ahaan mitir ah.
Haddii aad dooratay inaad qaadato cetilistat, hubi inaad qaadato qiyaasta cetilistat ee lagugula taliyay cuntadaada. Qiyaasta daawada loo yaqaan 'cetilistat' ayaa sida ugu fiican loogu qaataa cuntada, inta lagu jiro ama ilaa hal saac cuntadaada ka dib.
Daawada 'cetilistat' waxay ku dhacdaa kaabsoollo ama qaab kiniin ah loogu talagalay maamulka afka oo leh galaas biyo ah. Waxa kale oo aad ka heli kartaa budada cetilistat. Qiyaasta saxda ah ee cetilistat iyo muddada daaweynta waxaa go'aamin doona bixiyahaaga daryeelka caafimaadka iyadoo lagu saleynayo xaaladda iyo jawaabta bilowga ah ee daaweynta.
Miisaanka Cetilistat Faa'iidooyinka si kastaba ha ahaatee looma sheegin carruurta, markaa waa inaadan taas siin carruurta. Tani waxay gaar ahaan la jirtaa carruurta qaan-gaarka ah maadaama cetilistat ay saameyn ku yeelan karto koritaankooda si dherer ahaan ah.
Cetilistat waxaa loo arkaa mid aan amaan u aheyn hooyooyinka uurka leh ama dumarka isku dayaya inay uur qaadaan. Waxay u keeni kartaa khatar caafimaad ilmaha aan weli dhalan.
Hooyooyinka naas nuujinaya waxaa sidoo kale lagula talinayaa inay ka fogaadaan sheybaarka maadaama ay u gudbin karto ilmaha.
Dhakhtarkaagu wuxuu kugula talin karaa inaad qaadato ama aad ka fogaato cetilistat sababo la xiriira xaalado caafimaad oo kale oo jira sida xasaasiyad, cholestasis (beer xanuun), iyo malabsorption syndrome oo raaga.
Budada Cetilistat waxaa loo arkaa mid amaan ah laakiin haddii aad dhaafto qiyaasta lagu taliyey ee cetilistat ama aad ku guuldareysato inaad raacdo tilmaamaha waxaad la kulmeysaa qaar ka mid ah waxyeelooyinka cetilistat. Dhibaatooyinkan soo raaca waxay dhici karaan bilowga laakiin waa kuwo khafiif ah waana inay la baxaan iyadoo la sii wado isticmaalka daroogada. Haddii aysan bixin, waa inaad la xiriirtaa dhakhtarkaaga.
Dhibaatooyinka ugu badan ee ay keento cetilistat waa;
Gaas leh dheecaan
Dhaqdhaqaaq deg deg ah oo soo noqnoqda oo laga yaabo inay adkaato in la xakameeyo
Saxaro saliid leh ama dufan leh
Dhibaatooyinka qaarkood ee dhif ah laakiin aad u daran ayaa sidoo kale dhici kara. Waa inaad isla markiiba la tashataa dhakhtarkaaga markaad aragto dhibaatooyinka soo socda ee soo socda;
Cagaarshow (indhaha oo jaale noqda ama jirka oo dhan)
Daal aan caadi ahayn
Dhibaato liqitaan ama neefsasho.
Faa'iidada miisaanka luminta Cetilistat ee maaraynta buurnaanta ayaa ah isticmaalka ugu weyn ee lagu yaqaan. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira faa'iidooyin kale oo cetilistat ah oo ka dhigaya mid kala duwan oo ka dhex muuqda daroogooyinka kale ee miisaanka lumiya.
Hoos waxaa ku yaal qaar ka mid ah faa'iidooyinka cetilistat;
Kaa caawinaya inaad ku noolaato qaab nololeed caafimaad leh miisaan lumis
Cetilistat waa mid ka mid ah daroogooyinka miisaanka lumiya iyo sidoo kale wakiil ka hortagga buurnida. Noloshaada caadiga ah helitaanka culeys xad dhaaf ah waxay u horseedaa koror ku yimaada cabirka iyo dufanka jirka oo badanaa loo yaqaan culeys ama cayilan. Labada xaaladood waxay la xiriiraan arrimo caafimaad sida nooca sonkorowga nooca 2aad, cudurka wadnaha sida istaroogga, dhiig karka, iyo kansarrada qaarkood sida kansarka malawadka iyo naasaha.
Farqiga u dhexeeya shakhsiyaadka cayilan iyo cayilku waa heerka qiyaasta jirka (BMI). Qofka waxaa loo tixgeliyaa inuu miisaankiisu culus yahay marka BMI-gu ka weynaado ama u dhigmo 25 halka qofka buurnida leh BMI ka weyn ama u dhigmo 30.
Qaadashada cetilistat waxay ka caawin doontaa jirkaaga inuu yareeyo isku-darka dufannada sidaas awgeedna u ilaaliyo BMI caafimaad qabta sidaas darteedna qaab nololeed caafimaad leh. Tani waa sababta oo ah waxay hoos u dhigeysaa fursadaha xaaladaha naf-gooyada ah ee la xiriira buurnida.
Waxay ka caawisaa miisaanka oo yaraada iyo yareynta hemoglobin glycosylated ee bukaanada sonkorowga cayilan
Sonkorowga iyo gaar ahaan nooca sonkorowga 2 oo sidoo kale loo yaqaan sonkorowga mellitus waa cillad guud oo ku dhacda bukaannada cayilan. Nooca 2aad ee sonkorowga wuxuu dhacaa marka unugyada jirka ay iska caabiyaan saameynta saxda ah ee insulin, taas oo ah in gulukoosta dhiigga lagu jiheeyo unugyada. Tani waxay horseedaa gulukoos dhiig ku urursan. buurnida ayaa lagu yaqaan inay si weyn u kordhiso dhacdooyinka nooca 2aad ee sonkorowga.
Glycosylated hemoglobin (hemoglobin oo ay gulukooska ku xidho) waa cabbiro xakameynta mellitus muddada dheer ee sonkorowga. Heerka glycosylated hemoglobin (HbA1c) wuxuu muujinayaa celceliska gulukooska dhiigga seddexdii bilood ee la soo dhaafay. Qiyaasta caadiga ah ee hemoglobin glycosylated waa 7% laakiin dadka qaba cudurka macaanka badankood waxay kaliya gaari karaan 9%.
Toddobaadkii 12, oo la kala soocay, daraasad caafimaad oo lagu xakameynayo xakamaynta placebo, bukaanada buurnaanta leh ee leh sonkorowga nooca 2 ayaa la siiyay cetilistat (40, 80, ama 120mg saddex jeer maalintii). Waxay sidoo kale ahayd inay ku dhegaan cuntada hypocaloric. Cetilistat waxaa lagu ogaadey inuu si weyn u yareynayo culeyska sidoo kale wuxuu yareynayaa hemoglobin glycosylated (HbA1c). Waxaa sidoo kale la xusay in cetilistat si wanaagsan loo dulqaatay.
Cetilistat si wanaagsan ayaa loo dulqaatay
Marka laga reebo wax ku oolnimadeeda yareynta miisaanka iyo maaraynta buurnaanta, wax badan baa ka jira. Cetilistat si wanaagsan ayaa loogu dulqaadan karaa jirka iyada oo leh waxyeelo fudud oo dhexdhexaad ah oo la maareyn karo oo laga yaabo inay ku baaba'do iyadoo la sii wado isticmaalka cetilistat.
In kasta oo inteena badani u tagto waxtarka daawada, haddana sidoo kale way fiicantahay in la raadsado dawo jidhkaaga u dulqaata.
Marxaladda labaad ee daraasadda bukaan-socodka ayaa la qabtay toddobaadyo 2 iyadoo la adeegsanayo labadaba cetilistat iyo liiska guud ee la heli karo. Labada daroogo ee culeyska lumiya ayaa la ogaaday inay wax ku ool u yihiin yareynta miisaanka, yareynta hemoglobin glycosylated iyo sidoo kale yareynta wareega dhexda. Sidoo kale, cetilisat waxaa lagu ogaadey inuu sifiican uga dulqaadanyahay kan liistada, oo leh waxyeelo yar oo kayar oo laxiriira cetilistat.
Waxay kaa caawineysaa inaad ku gaarto hadafyadaada waqti gaaban
Miisaanka oo yaraada ayaa ah hadaf muddo-gaaban ah oo lagu gaari karo isbeddelka cuntada oo ay weheliso jimicsi joogto ah. Si kastaba ha noqotee, joogteynta miisaanka caafimaadka leh waa himilada muddada-dheer.
Dhakhtarkaagu wuxuu kugula talin karaa daawo qorista miisaanka luminta marka qaab nololeed caafimaad leh (cunto iyo jimicsi) aysan gaarin miisaanka lumay ee loogu talagalay. Cetilistat waa mid ka mid ah daawooyinka loo isticmaali karo iyada oo ay weheliso cunto dufan yar iyo jimicsi joogto ah. Si ka duwan daawooyinka kale ee ka hortagga cayilka oo waqti dheer qaata si loo gaaro miisaanka oo yaraada, cetilistat waxay qaadataa 12 toddobaad si loo bixiyo miisaanka la doonayo.
Waxay kaa caawin kartaa yareynta heerka kolestaroolkaaga
Kalastaroolka waxaa loola jeedaa walax wax badan leh. Waxaa looga baahan yahay jirkaaga inuu dhiso unugyo si kastaba ha noqotee, inbadan ayaa sababi karta arrimo ku saabsan jirka.
Kalastaroolka waxaa sameeya beerka halka qaarna ka yimaadaan cuntooyinka aad isticmaashid sida hilibka, digaaga, iyo waxyaabaha caanaha laga buuxiyo ee dufanka badan. Waxaa jira 2 nooc oo kolestarool ah. Kalastaroolka-cufnaanta-hooseeya (LDL) kolestaroolka ama "xun" kolestaroolka iyo lipoproteinka-cufnaanta sare ama "wanaagsan" kolestaroolka. LDL waxay gacan ka geysataa isku-soo-uruurinta dufanka leh ee halbowlayaasha sidaa darteed waxay kordhisaa halista cudurrada wadnaha sida istaroogga iyo wadno-qabadka.
Cayilnaanta cayilku waxay kordhisaa halista aad u leedahay heerarka kolestaroolka sareeya. Cayilku wuxuu kordhiyaa qaddarka kolestaroolka LDL isagoo beddelaya jawaabta jirkaaga ee dufanka aad cunayso. Caabuqa ay sababeen cayilka ayaa sidoo kale hoos u dhigaya jawaabta jirkaaga ee isbeddelada qaadashada dufanka cuntada. Intaa waxaa dheer, caabbinta insulinta ayaa sidoo kale ku badan bukaanada qaba buurnida. Tani waxay sidoo kale saameyneysaa habka caadiga ah ee dufanka jirkaaga.
Cetilistat wuxuu yareyn karaa wadarta kolestaroolka iyo sidoo kale kolestaroolka LDL.
Daraasad ku lug leh jiirka, cetilistat oo lagu maamulo afka ayaa lagu ogaadey inay wanaajineyso buurnida iyo wadarta kolestaroolka.
Waxay yareysaa halista cudurka wadnaha
Cudurka wadnaha iyo xididada waa erey wada jir ah oo loola jeedo xanuunada saameeya wadnaha ama xididdada dhiigga. Cudurka wadnaha iyo xididada dhiigga waxaa ka mid ah cudurada halbawlayaasha wadnaha sida wadno istaagga iyo angina, istaroog, wadne istaag, iyo wadno xanuun wadnaha iyo kuwa kale.
Sababta cudurrada wadnaha iyo xididdada way kala duwan yihiin waxayna kuxirantahay cilada gaarka ah Tusaale ahaan, cudurka halbawlayaasha wadnaha, istaroogga, iyo cudurada halbowlaha ee fawdada waxaa sababi kara dhiig kar, nooca sonkorowga 2, sigaar cabista, jimicsi la aanta, buurnida, iyo cunada oo liidata. Cayilka ayaa lagu qiyaasaa inuu xisaabtamo ugu yaraan 5% cudurada wadnaha iyo xididdada.
Sidaa darteed, Cetilistat, waxay yareysaa halista cudurrada wadnaha iyo xididada iyadoo la daaweynayo buurnida iyo dhiirigelinta cunno caafimaad leh oo door ka ciyaareysa kahortagga dhacdooyinka cudurada wadnaha.
Toddobaadkii 12 ee la kala soocay, daraasad laba-indhoole ah oo ku lug leh bukaanno cayilan oo qaba sonkorowga mellitus, cetilistat waxaa lagu qaatay 40, 80, ama 120 mg saddex jeer maalintii. Kaqeybgalayaasha waxaa sidoo kale lagula taliyay inay ilaaliyaan cunada dufanka yar inta lagu jiro mudada daraasada.
Daraasadani waxay soo warisay hoos u dhac miisaan culus iyo sidoo kale hagaajinta xakamaynta glycemic. Intaa waxaa dheer, waxaa jiray hoos u dhac weyn oo ku yimid wareegga dhexda oo ka mid ah sababaha halista ugu jira cudurrada wadnaha iyo xididdada.
Waxaa laga yaabaa inuu yareeyo cadaadiska dhiiggaaga
Dhiig karka sidoo kale loo yaqaan 'hypertension' waa xaalad ay tahay in awooda dhiiggu ee ka dhanka ah darbiyada xididada ay kor u sii kacaan in mudo ah. Dhiirrigelintu waa khatar maadaama ay ku qasbeyso wadnaha inuu si aad ah u shaqeeyo oo u horseedaya adkaanshaha halbowlayaasha.
Dhiirrigelintu waxay la xiriirtaa qaar ka mid ah cudurrada nafta halista u ah sida istaroogga, kilyaha, iyo cudurrada beerka iyo kuwa kale.
Miisaan culus ama cayillan ayaa kor u qaadaya fursadahaaga inuu kugu dhaco dhiig karka. Cadaadiska dhiiggaagu wuxuu kordhayaa culeyska oo kordha.
Sidaas darteed, waxay ka dhigan tahay in miisaanka oo yaraada uu yahay mid ka mid ah dariiqooyinka lagu dhimo cadaadiska dhiiggaaga. Tani waa halka ay ka timaaddo cetilistat maxaa yeelay waxay u horseedaa miisaan lumis weyn muddo gaaban.
Halkee baan karaa iibsato Cetilistat?
Hadaad ka fiirsanaysid isticmaalka cetilistat ka iibso khadka tooska ah gurigaaga. Budada Cetilistat waxaa laga heli karaa khadka tooska ah ee alaab-qeybiyeyaasha ama soo saareyaasha cetilistat dukaamada. CMOAPI waa mid ka mid ah soo saareyaasha cetilistat ee iibiya alaab tayo leh oo leh adeeg macaamiil oo aad u wanaagsan.
Markii aad iibsaneysid budada cetilistat ama kaabsulka cetilistat CMOAPI ama alaab-qeybiyeyaasha kale ee ceelistat si taxaddar leh u hubi sumadaha si habboon loogu isticmaalo daroogada. Tixgeli qiyaasta lagu taliyey ee cetilistat sida uu faray soo saaraha cetilistat laakiin sidoo kale raac talooyinka bixiyahaaga daryeelka caafimaadka.
Reading dib u eegista cetilistat waayo-aragnimadaada shaqsiyeed ayaa laga yaabaa inay kaa caawiso inaad faham fiican ka hesho waxtarkiisa iyo sidoo kale amniga. Inta badan macaamiisha cetilistat waxay wax ku iibsadaan khadka tooska ah waxayna ka tagi karaan dib u eegista cetilistat iyagoo ku saleynaya waaya-aragnimadooda shaqsiyeed.
Qiimaha Cetilistat sidoo kale waa tixgelin markaad rabto inaad iibsato. CMOAPI waa mid kamid ah alaab-qeybiyeyaasha cetilistat kuwaas oo laga yaabo inay bixiyaan qiimo tartan cetilistat ah. Si kastaba ha noqotee, qiimaha cetilistat waa inuusan kaa indhatirin inaad doorato alaab tayo liidata.
Inaad wax ka iibsato raaxada gurigaaga ayaa laga yaabaa inay kugu kalifayso inaad wax iibsato oo degdeg ah, hase yeeshe, weli waxaad u baahan tahay inaad sameyso habayn habboon oo aad ku ogaan karto helitaanka daawooyinka aad u baahan tahay ka hor.
Bryson, A., de la Motte, S., & Dunk, C. (2009). Yaraynta nuugista dufanka cuntada ee sheeko-xireyaasha caloosha ee caloosha ku shaqeeya ee mutadawiciinta caafimaadka qaba. Joornaalka Ingiriiska ee daaweynta dawooyinka, 67(3), 309–315. https://doi.org/10.1111/j.1365-2125.2008.03311.x.
Hainer V. (2014). Dulmarka guud ee dawooyinka lidka ku ah jirka. Fikrad khabiir ah oo ku saabsan daaweynta dawooyinka, 15(14), 1975–1978. https://doi.org/10.1517/14656566.2014.946904.
Kopelman, P., Groot, G., Rissanen, A., Rossner, S., Toubro, S., Palmer, R., Hallam, R., Bryson, A., & Hickling, RI (2010). Miisaanka oo yaraada, yareynta HbA1c, iyo u dulqaadashada cetilistat ee tijaabinta wejiga 2 ee tijaabada ah ee xakamaynta placebo ee sonkorowga cayilan: isbarbardhiga orlistat (Xenical). Cayilka (Gu'ga Silver, Md.), 18(1), 108–115. https://doi.org/10.1038/oby.2009.155.
Kopelman, P; Bryson, A; Hickling, R; Rissanen, A; Rossner, S; Toubro, S; Valensi, P (2007). "Cetilistat (ATL-962), a novel lipase inhibitor: Toddobaadkii 12 ee la kala soocay, daraasadda xakamaynta xakamaynta ee miisaanka yareynta bukaannada buuran" Joornaalka Caalamiga ah ee Cayilka. 31 (3): 494–9. doi: 10.1038 / sj.ijo.0803446. PMID 16953261.
Padwal, R (2008). "Cetilistat, oo ka hortag u ah lipasease-ka daaweynta buurnaanta". Ra'yiga Hada Kajira Dawooyinka Baarista. 9 (4): 414– PMID 18393108.
Yamada Y, Kato T, Ogino H, Ashina S, Kato K (2008). "Cetilistat (ATL-962), oo ah sheeko-joojiye nuugista 'pancreatic lipase inhibitor', wuxuu hagaajiyaa miisaanka jirka oo kor u qaadaa wuxuuna hagaajiyaa muuqaalka dufanka ee jiirka". Cilmi-baarista Hormone iyo Metabolic. 40 (8): 539– doi: 10.1055 / s-2008-1076699. PMID 18500680. S2CID 29076657.